Gmail Account သစ် ဖွင့်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် မလိုပါဘူး။ စမ်းကြည့်ပါလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Gmail Account သစ် ဖွင့်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် မလိုပါဘူး။ စမ်းကြည့်ပါလား။
Gmail Account သစ် ဖွင့်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် မလိုပါဘူး။ စမ်းကြည့်ပါလား။
Posted by Good Idea on Jul 20, 2011 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 18 comments
အရင်ဆုံး အထက်က ပြထားတဲ့ Website ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီး ဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်ပြီး Continue လုပ်ပါ။ 10% ကနေ 90% ထိ Loading လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင် Security Question တွေ ဖြည့်ခိုင်းသည်ကို ဖြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် I Acept my create account ကိုနှိပ်ပါ။ အဲအခါကျရင် အကောင့်သစ်ဖွင့်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။
ချစ်သူမြို့တော်ဆိုဒ်တွင် အညာသားလေး ရေးသားတင်ပြထားသည်ကို မြန်မာပြည်ကလူများ အသုံးကျမည် ထင်၍ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အကောင်အသစ်ဖွင်ချင်နေတာ ကျေးဇူးပါ လုပ်ကြည်လိုက်အုံးမယ်
တစ်ကယ်တော့ Bluworld.org ကလုပ်ပေးထားတဲ့ Google App Email တစ်ခုပါ
ကိုယ်က ဇာတ်ရှိန်တတ်ပြီး အရေးကြီးအချက်အလက်တွေ သိမ်းပြီးကာမှ Bluworld က ဒေ၀ါလီခံတာတို့ ..
အကြောင်းတစ်ခုခုကြေင့် ကိုယ့်အီးမေးလ် ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တာတို့ ဆိုရင်တော့ သေပြီဆရာပေါ့
၀င်လာသမျှသော username@blumail.org မှန်သမျှကို Bluworld@blumail.com သို့ မဟုတ် Bluworld.org က Admin က ပိုင်ပါလိမ့်မယ်..ယုံကြည်ရင်တော့ ကိုးစားကြပါ
တစ်သက်လုံး သုံးစားခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပါပဲ
စမ်းဖွင့်ကြည့် ပြီးပါပြီ ။ ဖွင့်တဲ့လူအရမ်းများနေလို့Try again ပဲပြောနေပါတယ်။နောက်တစ်ခါ အဆင်ပြေရင်ထပ်ဖွင့်ကြည့် ပါဦးမယ်။ တင်ထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
For your information, be careful villagers,
“http://bluworld.org/” is notag-mail.
You cannot trust it like real g-mail.
If you live in Myanmar,
if you don’t need to do electronic money transfer with this account,
then, it’s quite OK.
But, in foreign countries, your e-mail is important.
Because, it may attached to your Bank Account or your credit Card.
Because, you can send & receive money from your e-mail.
Yesterday, I sent money, from my e-mail, to XXX e-mail,
through Paypal ( Paypal monitor money transaction ).
ဒါပေမဲ. ဒီဆိုဒ်က အာမခံ မရှိဘူးဗျ
Blu mail က Blu main ပါပဲ … gmail / gtalk နဲ့ feature သာဆင်တာ … blumail.org နဲ့ပဲ ဆုံးတယ် … ဘယ်လိုမှ gmail.com မရဘူး … ။ သူ့ကြည့်ရတာ ၀င်ကစွပ်ကောင်နဲ့ တူတယ် … သူများ အခွံထဲ ၀င်ပြီးမှ အသက်ရှင်ရလို့ပါပဲ ။
အဲအကောင့်ကို ဂျီးမေးလ်ဝင်ချင်ရင်တော့ http://mail.google.com/a/blumail.org ဆိုရင် မေးလ်စစ်လို့ရပါတယ်။ စမ်းသပ်ကာလပေါ့လေ… ဂိုဂယ်ပလပ်လိုပေါ့…
Google က ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းရှိတဲ့သူမှန်သမျှကို Google Application Email အကောင့် (၅၀) ပေးထားပြီးသားပဲဟာ
သူဂျီးက ရောင်းဖို့စီစဉ်ထားပုံပါပဲ။ အဲလိုမေးလ်တွေ သူတစ်ယောက်ထဲအသုံးပြုနေပုံပဲလေ…
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…Gtalk မှာဝင်လို့ရပြီဗျ…Gmail မှာတော့မရသေးဘူး…
gmail account အသစ်လုပ်ချင်ရင် ၉၀၀၀ ကျပ်တဲ့….
@blumail.org သုံး၇င် သူငယ်ချင်းတွေ Invite လုပ်တဲ.အခါမှာ @gmail.com ပြောင်းပြီး invite လုပ်မှ အဆင်ပြေမယ်။
g talk ၀င်တဲ.အချိန် (sign in) user name နေ၇ာမှာ @blumail.org ပါေ၇းမှ ၀င်လို.၇မယ်ဗျ။
အဲ့ဒါ ဒီမှာပဲတင်ထားတာတွေ့ဖူးလို့ တစ်ခါလုပ်လိုက်ပြီးပြီ … မဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး .
တစ်ခုမကောင်းတာက … gtalk လို တစ်ခါတည်းဝင်ရတာမဟုတ်ဘူး … browser ဖွင့်ရတာကိုမကြိုက်တာ …
ဒါက Gmail Client က လုပ်ပေးတာမှ မဟုတ်တာ။ တခြား Mail Provider တစ်ခုပါ။ အဲဒီလို တခြား မေးလ် အသစ် တစ်ခု လိုချင်ရင်တော့ http://www.bing.com ကို သွားပြီး Live mail ဒါမှမဟုတ် Hotmail အကောင့် ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ Microsoft Cop.. ကနေ ထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။ Gmail ထက် မသာပေမယ့် Gmail လောက်နီးပါး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Microsoft က ဆိုတော့ အပ်ြည့်အ၀ အာမခံချက် ရှိတယ်လေ။ သူ့ အကောင့် ပုံစံက username@live.com, username@hotmail.com ပါပဲ။
ဟိုဘက်မှာ အဆင်မပြေလို့ ဒီပို့ စ်ဖက်ဝင်လာမိပါတယ်။ဘယ်လိုမှ လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဟင်း. နောက်မှဘဲ try တော့မယ်။ကွန်နက်ရှင်ရေ နင့်ကိုတော့ ငါစိတ်ကုန်တယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တော့ တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပီဗျ .. လွယ်သားပဲ
အဲဒိဆိုဒ်က ခုတော့ မရတော့ဘူး
Sorry, BluMail is not available in your country. လို့ပြောနေကြောင်းပါ၊